Xildhibaan Mahad Salaad “Waxaan ka cabsi qabaa in DF-ka ay Siyaasadayso mushaarka Ciidamada” – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Salaad “Waxaan ka cabsi qabaa in DF-ka ay Siyaasadayso mushaarka Ciidamada”
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay Ciidamada Dowladda ee ka soo baxaya furamah dagaalka ee degaano iyo degmooyin katirsan Shabeelaha Dhexe ee Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in Dowladda Soomaaliya ay siyaasadayso mushaarka Ciidamada Qaranka kadibna ay saameyn ballaaran ku yeelato Dowladda Soomaaliya iyo amaanka dalka.
“Xiriir aan la sameeyay Saraakiil ka tirsan ciidanka Booliska waxay ii sheegeen in mushaar la’aanta ciidamada in aysan ku koobneyn Milateriga kaliya ee sidoo kale ciidamadii Nabadsugida laga soo wareejiyay ee Booliska lagu daray iyo kuwii 14kii Oktoobar iyagana mudo dhowr bilood ah aysan mushaar qaadan”ayuu yiri Mahad Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya
“Waxaan ugu baaqaynaa Madaxda Qaranka in aan la siyaasadayn mushaarka ciidamada, lagana dhaafo ciidamada hadalada xaqiiqada ka fog ee warbaahinta loo marinayo” ayuu ku yiri qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay Mahad Maxamed Salaad.
“Degaano xoreyntooda naf iyo maal loo huray yaan si fudud cadowga loogu gacan gelin, ciidamada iyo Saraakiishoodana yaan la iska horkeenin” ayuu ku yiri qoraalkiisa Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Milateriga Soomaaliya ayaa maanta ka soo baxay degmada Mahadaay, Qalimow, Garsaale, Ceelbaraf, iyo farriisimo ay ku lahaayeen duleedka magaalada Jowhar ee xarunta HirShabeelle.
Kulankii golaha wakiillada Puntland ee maanta oo aan qabsoomin
Xildhibaan Xaamud oo ka hadlay shirka maalgashiga Puntland ee la qorshaynayo